Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » Virus ကူးနိုင်လား
1 Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 5:46 pm
Hard Disk တစ်လုံးတည်းမှာ Window XP ကို Partition တွေပိုင်းပြီး ၂ခု ၃ခု သွင်းထားရင် အကယ်လို့ Window ၁ခုမှာ Virus ၀င်ရင် ကျန်တဲ့ Window တွေကို Virus ကူးနိုင်လား။
2 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 5:51 pm
မကူးနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် Virus ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကူးအောင်ရေးထားရင် ကူးနိုင်ပါတယ်။
3 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 7:01 pm
4 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 7:28 pm
Theory နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မကူးနိုင်ပါဘူး။
Partition တစ်ခုမှာ Window တစ်ခုတင်ထားတယ်။ အဲဒီ့ Window က ဗိုင်းရပ်စ်ထိတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခြားတစ်ခုနဲ့ window တင်ပြီး ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ နောက် Window တစ်ခုမှာ တင်ထားတဲ့ anti virus နဲ့ စစ်ချလို့တောင်ရပါသေးတယ်။ ဒိလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် တစ်ခြား window တစ်ခုနဲ့ အလုပ်ကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ dual boot ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Data တွေကိုပါကူးပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီ့ဒေတာကြောင့် နောက် Partition မှာတင်ထားတဲ့ window ကိုတော့ virus ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တော်တော်များများဟာလည်း OS ကိုပဲတိုက်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆိုက်ကိုရေးထားသလိုပါပဲ ... ကူးအောင်ရေးထားရင်တော့ ကူးမှာပေါ့။
5 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 7:36 pm
အဲလို သီအိုရီကျကျလေး ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။
ဒါနဲ့ Data တွေကို ကူးပြီဆိုရင်က ဘာကိုပြောတာလဲကွ။ ငါနားမလည်လို့နည်းနည်းလောက် ထပ်ရှင်းပါဦး။
6 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 23rd November 2009, 7:42 pm
Partition3ပိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာ Partition နှစ်ခုက window တင်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ data တွေသိမ်းထားမယ်။ virus က အဲဒီ့ data ဆီရောက်သွားမယ်ဆိုရင် window ကိုပါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ data ကဘာတွေလဲဆိုတော့ သီချင်းတွေ ၊ စာအုပ်တွေ ၊ word file ၊ excel file တွေ ၊ my document တွေ၊ ကိုပြောတာလေ။ ဒီပရိုဂမာနဲ့ ငါညစ်တယ်။ သူသိတာ variable တွေပဲ ရှိတယ်ထင်တယ်
7 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 24th November 2009, 4:57 pm
Virus က Hard Disk ရဲ့ Partition တိုင်းမှာ autorun တွေရေးထားရင်ရော
8 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 24th November 2009, 7:13 pm
SilentHill wrote: Virus က Hard Disk ရဲ့ Partition တိုင်းမှာ autorun တွေရေးထားရင်ရော
ဒါဆိုရင်တော့ Virus ကူးပြီးသား Windows အပြင် နောက် Windows တစ်ခုခုနဲ့ အဲဒီ့ Partition ကို ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ Autorun က အလုပ်လုပ်ရင် (သို့) virus ကို မသိဘဲ Click မိရင် ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်တိုင် Virus ကို Click လိုက်လို့ ဖြစ်သွားမယ့်သဘောမျိုးပါ။ ဒီတိုင်းတော့ auto ကြီး ကူးမသွားပါဘူး။ အတက်ကာ ပြောသလိုဘဲ တခြား OS တစ်ခုခုပေါ်သွားပြီးတော့ ဗိုင်းဗိုင်း ကိုက်ခံရတဲ့ OS ကို scan စစ်ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်တောင် သတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် /-tt@Ck3r ကတော့ ပိုကျွမ်းမယ်ထင်တယ်၊
9 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 24th November 2009, 7:17 pm
٨††∂¢қєř wrote: Partition3ပိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာ Partition နှစ်ခုက window တင်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ data တွေသိမ်းထားမယ်။ virus က အဲဒီ့ data ဆီရောက်သွားမယ်ဆိုရင် window ကိုပါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ data ကဘာတွေလဲဆိုတော့ သီချင်းတွေ ၊ စာအုပ်တွေ ၊ word file ၊ excel file တွေ ၊ my document တွေ၊ ကိုပြောတာလေ။ ဒီပရိုဂမာနဲ့ ငါညစ်တယ်။ သူသိတာ variable တွေပဲ ရှိတယ်ထင်တယ်
PS: ငါက ပရိုဂရမ်မာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုပြောပါနဲ့ တကယ့် Programmer တွေ သိက္ခာကျနေဦးမယ်။ ဗေရီရေဘယ် ဆိုတာဘာကြီးလဲ???
10 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 26th November 2009, 10:27 am
ထင်တာပြောရရင် autorun.ini လား။ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲဗျ.....................
11 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 26th November 2009, 12:27 pm
autorun.inf မဟုတ်ပါဘူးလားဗျ။ ?????
12 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 26th November 2009, 1:41 pm
٨††∂¢қєř wrote: autorun.inf မဟုတ်ပါဘူးလားဗျ။ ????? [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
13 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 26th November 2009, 5:05 pm
ini နဲ့ inf ဘာကွာလဲဟင် [You must be registered and logged in to see this image.]
14 Re: Virus ကူးနိုင်လား on 27th November 2009, 10:30 am
*.ini mean "Initialization" and *.inf mean "Information"
i wil explain some more about both later
15 Re: Virus ကူးနိုင်လား